रोहित शेट्टीले किने लम्बोर्गिनी कार, मुल्य सुनेर उड्नेछ तपाईको होश! – " सुलभ खबर "
रोहित शेट्टीले किने लम्बोर्गिनी कार, मुल्य सुनेर उड्नेछ तपाईको होश!
शानदार फिल्म सिंघम र सिम्बाको निर्माता रोहित शेट्टीको घरमा नयाँ पाहुना थपिएको छ । रोहितले एक गाडी किनेका छन् । रोहित शेट्टिले हालै ३ करोडको पहेलो रङको लम्बोर्गिनी यूरस किनेका छन् । यो कार कमै मान्छेले मात्र किन्छन् । रोहित शेट्टीले हालै यस कारको मुम्बईको डिलरबाट डेलिभरी गरेका छन् । यस नयाँ गाडी लम्बोर्गिनी युरस (Lamborghini Urus)भएको तस्विर रोहितले इन्स्टाग्राममा शेयर गरेका छन्।
यस गाडीमा ८ सिलिन्डर हुन्छ र यसको अधिकतम स्पीड ३०५ किलोमीटर प्रति घण्टा रहेको छ । यो गाडी जिरो देखि १०० को स्पीडमा मात्र ३.६ सेकेन्डमा पुग्न सक्छ। यस गाडीमा एक पटकमा ८५ लिटर तेल भरिन्छ । यसमा ४.० लिटर ट्विन टर्बो भी एट इन्जिन लगाईएको छ ।
सिंघम र सिम्बापछि रोहित अब सूर्यवंशी लिएर आउदै छन्। यस फिल्ममा अक्षय कुमार मुख्य भूमिकामा हुनेछन् । रोहितलाई कारको शोख निकै रहेको छ। आफ्नो हरेक फिल्ममा रोहित शेट्टी कारले कैयौँ एक्शन सीन बनाउछन्। उनीसँग कैयौँ गाडी छ जुनमा फोर्ड मस्टंग र रेंज रोवर स्पोर्ट्स जस्ता गाडी पर्छ।
लता मंगेशकरलाई विष दिइएको थियो, लताका विषयमा रोचक दश जानकारी
मुम्बई। बलिउडकी दिग्गज गायिका लता मंगेशकरलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। उनलाई लतालाई श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको
संसदकी उपप्रमुखद्वारा आफैंलाई राष्ट्रपति घोषणा
मेक्सिको सिटी (बिबिसी)– बोलिभियाकी विपक्षी सिनेटर जान्निए आनियसले आफूले आफैंलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेकी
एजेन्सी । भाविन तुरकिया र उनका भाइले शून्यबाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले अर्बौँ डलरमा परिणत
एजेन्सी – निश्चित र उपयुक्त उमेरमा बच्चा जन्माउँदा मात्रै आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ।
यी ६ सेलिब्रेटीसँग छ करोडौंको कार, सञ्जय र अमिताभ भन्दा महँगो गाडी चढ्छिन् प्रियंका
बलिउडका कयौं स्टार छन् जसले नाम र दाम धेरै कमाएका छन् ।धेरै दाम कमाएका कारण
२१ वर्ष पुगेका साउदी युवतीले अब स्वतन्त्र रूपमा विदेश यात्रा गर्न पाउने
एजेन्सी– साउदी अरेबियाका महिलाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा विदेश यात्रा गर्न बाटो खुलेको छ ।शुक्रवार जारी शाही